စိတ်ဓာတ် Archives - YOYARLAY Digital Media and News
ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့ ရွှေပြည်သာက တက္ကစီသမားရဲ့ ရိုးသားတဲ့စိတ်ဓာတ်
လူတစ်ယောက်ဟာ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းရင် အဲဒီလူကို လူအများက လေးစားဂုဏ်ယူကြသလို အဲဒီလူမျိုးက ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ပါဘူး။ ရိုးသားပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတဲ့သူက အခုခေတ်မှာ ခက်ရှားရှားပါပဲ။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းပြီး ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာ ရွှေပြည်သာက တက္ကစီသမားတစ်ယောက်လည်း အပါအဝင်ပါ။ မနေ့က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ အကောင့်ပိုင်ရှင် Justin…
Published: October 1, 201910:39 am
စိတ်ဓာတ်တွေအရမ်းကျတဲ့အချိန်ရှိဖူးလား။ ဒါမှမဟုတ် အခုရှိနေလား။ အရမ်းကို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်ပေါ့။ တစ်လောကလုံးမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းများ ကံဆိုးမှုတွေအကုန်ကျရောက်နေသလား ထင်ရလောက်တဲ့အချိန်တွေပေါ့။ တစ်ယောက်တည်းလို့ ခံစားရတဲ့ခံစားချက်နဲ့ မငိုဖြစ်ဖို့ အားတင်းထားရတဲ့အချိန်တွေ။ အခန်းလေးထဲမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းနေချင်တဲ့အချိန်တွေပေါ့။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောပြလိုက်ချင်ပေမယ့် အရေးတယူလုပ်ခံရမှာမဟုတ်မှန်းသေချာတဲ့အခါ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါမှမဟုတ်…
Published: August 9, 20195:15 pm
သင်တစ်ခါတစ်လေ တစ်ခုခုကိုအားကြိုးမာန်တက်လုပ်ပြီးမှ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုဆုံးရှုံးပြီး ပြီးအောင်မလုပ်နိုင်တာမျိုးကြုံဖူးလား ? ဟာသတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကန့်သတ်ထားတဲ့အချိန်က အကောင်းဆုံး စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုပါတဲ့။ ဒါကမှန်လား ? မှန်ချင်မှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေတော်တော်များများမှာတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလိုမျိုး ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုကိုရှာရခက်ပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ဘဲ ဒါဟာ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။…
Published: April 7, 201911:40 am
Published: March 26, 201912:46 am
Published: February 26, 20191:21 pm